असहिष्णु सुरक्षा व्यवहार | bethanchokkhabar.com
असहिष्णु सुरक्षा व्यवहार
आइतबार, भाद्र १०, २०७५ | ३:१७:०८ |
बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै एक महिना अघिबाट आफन्त र स्थानीयले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । घटना भएको एक महिना बितिसकेको छ । प्रहरी प्रशासनले एक महिना बित्न लागेपछि अभियुक्त भन्दै एक जना ‘मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति’ पक्राउ गरी सार्वजनिक ग¥यो । स्थानीय मान्न तयार भएनन् किनकि सक्कली अभियुक्त ती होइनन् । त्यसपछि थप चर्कियो कञ्चनपुरमा आन्दोलन । आन्दोलनको राप काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ । संसद्मा विषय प्रवेश भएको छ, घटना संवेदनशील छ । घटनाको प्रकृतिले सक्कली अभियुक्त जोगाउन चलखेल भएको देखिन्छ । तर, प्रहरी प्रशासन यति निर्दयी भएर प्रस्तुत भयो, न्याय माग्न सडमा उत्रिएका जनताको गोली हानेर ज्यान लियो, कफ्र्यु लगायो । स्थानीयलाई न्याय माग्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास अझै जारी छ ।
कञ्चनपुरमा एक नाबालिकामाथि भएको मानावताविरोधी अपराध पहिलो होइन । मुलुकभर बलात्कार र त्यसपछि क्रूर हत्या जारी छ । कतिपय अभियुक्त अदालतको सहानुभूतिपूर्ण फैसलाका कारण कुकर्म गरेको पुष्टि भएर पनि फेरि समाजमा स्थापित भइसका छन् । मुलुकको कानुन बलात्कार र जघन्य हत्यामा संलग्नप्रति नरम दृष्टिकोण राखिरहेको छ । प्रहरी प्रशासन न्याय दिनुको सट्टा गोली हानेर जनता मार्न व्यस्त छ । न प्रदेश सरकार आपत्ति जनाउँछ, न केन्द्र सरकार न्याय माग्नेप्रतिको दमनमा उत्रनेमाथि कारबाही गर्न तत्परता देखाउँछ । फलतः कञ्चनपुर मात्र होइन आज सिंगो नागरिकको मन दुखेको छ, आक्रोश बढेको छ । अदालतले छोड्न आदेश दिएकालाई अदालत हाताबाटै पक्राउ गर्न प्रहरीलाई समय लाग्दैन तर निर्मलालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई पक्राउ गर्न, घटनाबारे अनुसन्धान तीव्र बनाउन सक्दैन । उल्टै न्याय माग्ने जनतालाई लाइसेन्सप्राप्त बन्दुकको सिकार बनाउँछ । सरकार जवाफ दिन सक्छ, सन्नी खुनाको अपराध के ? जसले निर्मलालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरे । के यो उनको अपराध थियो ? होइन भने गोली चलाएर आक्रमण गर्न खोज्यो भन्नुको तुक के ? अपराधमा अनुसन्धान गर्न एक महिनासम्म चुकेको प्रहरी कुन नैतिकताले बलात्कारीलाई कारबाही माग्नेलाई गोली हान्दै छ ?
सरकार जवाफ दिन सक्छ, सन्नी खुनाको अपराध के? जसले निर्मलालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरे। के यो उनको अपराध थियो? होइन भने गोली चलाएर आक्रमण गर्न खोज्यो भन्नुको तुक के? अपराधमा अनुसन्धान गर्न एक महिनासम्म चुकेको प्रहरी कुन नैतिकताले बलात्कारीलाई कारबाही माग्नेलाई गोली हान्दै छ ?
कञ्चनपुरमा भएको यो घटनामा निकट शंकाको घेरामा रहेका दुई जना पक्राउ परेका छन् । अनुसन्धान यतिमा मात्र पनि सीमित हुनुहुन्न । बहुआयामिक अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने दायित्व प्रहरीले चाडै पूरा गरोस् । साथै सन्नी खुनालाई मार्ने र सर्वसाधारणमाथि गोली बर्साउने प्रहरीलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । न्यायका लागि आन्दोलन गर्ने जनताको हक कुण्ठित गरेर अपराधी जोगाउने चलखेल स्वीकार्य हुँदैन । कम्तीमा प्रदेश सरकारले घटनाबारे बोल्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले किन गोली चल्यो र ज्यान लिइयो भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । मौजुदा कानुन संशोधन गरेर बलात्कार गर्ने र बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई आजीवन कैद सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ । किशोरी, बालबालिका र महिलाको सुरक्षामा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन नीतिगत निर्णय मात्र काफी छैन । जनचेतनासँगै अपराधमा संलग्नमाथि शून्य सहनशीलता र कुनै पनि हालतमा माफी नहुने कठोर सजायको व्यवस्था भए मात्र निर्मलाजस्ता अबोध बालिकामाथि न्याय हुनेछ । चेलीहरूले सुरक्षित महसुस गरेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन उनीहरूको सुरक्षाका लागि अब कुनै कसर बाँकी नराखौं ।